သင်၏အရောင်း ဦး ဆောင်မှုနောက်ဆက်တွဲပုံစံ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, မေလ 11, 2015 Douglas Karr
သင့်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအစီအစဉ်ကဘာလဲ အရောင်းဆောင်ပေါ်တက်အောက်ပါ? ငါမကြာခဏမကြာခဏပျက်ကွက် ... အလားအလာနှင့်တွေ့ဆုံပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲနှင့်စိတ်ကိုထိပ်ဆုံးနေဖို့လျစ်လျူရှုကြောက်တယ်။ ၎င်းသည်နေရာချထားရန်ခက်ခဲသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကြောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Salesvue မှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကဲ့သို့ CRM နှင့်အရောင်းအလိုအလျောက်.
MarketBridge ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကွာဟမှုကိုပေါင်းစည်းရန်အထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သော ဦး ဆောင်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုပိတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဒီ infographic ခေါ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်9အမျိုးအစားများအတွက် ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုနှင့်အတူလိုက်နာရန်မည်သို့မည်ပုံသိကောင်းစရာများခဲသည်မွေးမြူခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်းတို့အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
အားလုံးအမျိုးအစားများကို ဦး ဆောင်အတူလိုက်နာဖို့ဘယ်လို
အသုံး Big Data သင့်ရဲ့ ဦး ဆောင်အကြောင်းသင်ယူဖို့။
စီမံခန့်ခွဲ ကန ဦး ဆက်သွယ်မှု.
အီးမေးလ်သုံးပါ ဦး ဆောင်လမ်းပြ.
သင့်ရဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြအခါထိတွေ့ဆက်ဆံပါ စကားပြောဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ.
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ CRM အရင်းအမြစ်များ.
Tags: နောက်ဆက်တွဲနောက်ဆက်တွဲ ဦး ဆောင်လမ်းပြinfographic ဦး ဆောင်လမ်းပြဦး ဆောင်လမ်းပြinfographic ပြုစုပျိုးထောင် ဦး ဆောင်လမ်းပြမွေးမြူခြင်းအရောင်း ဦး ဆောင်မှုရောင်းအား infographic ဦး ဆောင်လမ်းပြ
မေလ 15, 2015 မှာ 11: 13 AM